Variety Myanmar – Page2– We Sub while you Sleep
Law of the Jungle Oct 24, 2020 - ?
Law of the Jungle: Zero Point “Zero Point” ဆိုတာကတော့ စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ တောထဲမှာ ဘာမှမပါဘဲနေထိုင်ရပ်တည်ရမယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ် ။ ပြီးတော့ ပါဝင်တဲ့ လူတွေအားလုံး​က တောနက်ထဲမှာ ဘာကိရိယာ တန်​​ဆာပလာမှမပါဘဲ ဘယ်သူအကူအညီမှ မရှိဘဲ နေထိုင်ရပ်တည်ရမယ့် ပုံစံပါ ။ Law of the Jungle…
Knowing Bros Dec 5, 2015 - ?
Knowing Bros <Men On A Mission/Ask Us Anything> ကျွန်တော်တို့ Variety Myanmar ကနေ ပရိတ်သတ်တွေတောင်းဆိုနေကြတဲ့ အစီအစဥ်အသစ်တစ်ခုကို ထပ်ပြီးတိုးချဲ့လိုက်ပါပြီ ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ လောင်မြိုက်ချင်းကင်းစွာနဲ့ Show အသစ်တစ်ခုကို ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Dec52015 ကစတင်ခဲ့တဲ့ ဒီ Show လေးကတော့ ကျောင်းစာသင်ခန်း ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ Reality…
Master in the House Dec 31, 2017 - ?
ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ Translator အကြိုက်ဆုံးရှိုးတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Master in the house ကို မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် ကြည့်ဖူးသူတွေက သိပြီးသား‌ဖြစ်လောက်ပေမယ့် ဒီ Show က တကယ်ကို ရသစုံလင်ပေးတဲ့ ရှိုးပါ Show ရဲ့ Format က နယ်ပယ်တစ်ခုစီက အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ လူတွေဆီ သွား တစ်ညအိပ်ပြီး ဝေယျာဝိစ္စတွေ အတူတူလုပ် သူတို့အတွေးအမြင်တွေကို…
Running Man Jul 11, 2010 - ?
Running Man ဆိုပြီး တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာသာမက ဥရောပနိုင်ငံများပါမကျန် လူသိများတဲ့ ရသစုံလင် Reality Show အစီအစဥ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်… အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ Hollywood အနုပညာရှင်တွေ၊ ကိုရီယားနာမည်ကြီး အဆိုတော်၊သရုပ်ဆောင်များစွာနှင့်အတူ နာမည်ကြီးအထင်ကရနေရာတွေမှာ မစ်ရှင်တွေပြီးမြောက်အောင် ယှဥ်ပြိုင်ကြရမှာပါ… ယူဂျယ်ဆော့၊ဂျီဆော့ဂျင်၊ကင်ဂျုံးဂု၊ဂန်ဂယ်ရီ၊ဆောင်းဂျီဟို၊ဟားဟား၊လီဂွမ်ဆူ၊ဆောင်းဂျွန်ကီ၊လစ်ဇီ တို့နှင့် ပွဲထွက်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်.. ထို့နောက် ရိုက်ကူးရေးအပိုင်း (၄၀) ကျော်လောက်မှာ ဆောင်းဂျွန်ကီ နှင့် လစ်ဇီတို့မပါဝင်တော့ပဲ ကျန်အဖွဲ့ဝင် (၇)ဦးဖြင့်ဆက်လက်…
Busted Season3Jan 22, 2021
Busted Season3(Myanmar Subtitle) အားလုံးစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ Busted Season3ကြီးလာပါပြီ ။ ဒီ Season3မှာတော့ Season2တုန်းက ပျောက်သွားတဲ့ သစ္စာဖောက်ကြီး လီဂွမ်ဆူဟာ ပြန်ပေါ်လာမှာပါ ။ Season2တုန်းက ပန်းလူသတ်သမား လီဆွန်းဂီကလည်း ဘယ်လိုဘယ်ပုံနဲ့ ပေါ်လာဦးမလဲဆိုတာ…
Variety Myanmar Trending This Week My Little Old Boy
Sub TV Show
Busted S3 E8
Busted Season3Ongoing ·5months ago
The Sixth Sense Ep 8
The Sixth Sense Ongoing ·6months ago
I Live Alone Ep 372
I Live Alone Ongoing ·7months ago
Amazing Saturday Ep 132
Amazing Saturday Ongoing ·7months ago
How Do You Play Ep 66
How Do You Play? Ongoing · 8 months ago
New Journey to the West Season S8 Ep2
New Journey to The West: Season 8 Ongoing ·7months ago
Infinite Challenge Ep 409
Infinite Challenge Ongoing · 8 months ago
I Can See Your Voice S07 E02
I Can See Your Voice: Season7Ongoing ·9months ago
Village Survival the Eight S2 E6
Village Survival, the Eight2Ongoing ·9months ago
Running Man Anmation S1E10
Roommate S2 E6
Ep 372 Sub
Ep 132 Sub
Ep 409 Sub
Roommate S1 E20
Ep 559 Sub
Running Girls Ep 4